အမှတ်တရ ပုဂံပြည် အပိုင်း – ၁ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အမှတ်တရ ပုဂံပြည် အပိုင်း – ၁
အမှတ်တရ ပုဂံပြည် အပိုင်း – ၁
Posted by we R one on Jan 5, 2012 in Creative Writing, Local Guides, Photography, Travel | 20 comments
Local Guide photography Travelling
ကားပေါ်မှာ မောမောနဲ အိပ်ပျော်လာလိုက်တာ ပုဂံမြို့ ကိုဝင်တာတောင် မသိလိုက်ဘူ.. Local Guide ရဲ့ အလွတ်ကျက်ထားတဲ့ စာသံပေသံ နဲ မိတ်ဆက်တဲ့ အသံကြားမှ နိုးတော့တယ်.. ။အိပ်ချင်မူးတူးနဲ နာ၇ီကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ မနက် ၁ဝး၃ဝ ခန့်၇ှိပြီ.။ ဒါဆို ပုပ္ပါးနဲ ပုဂံက ၂ နာ၇ီ ကျော်ကျော်လောက် ဝေးဒါပေါ့.။ Local Guide ကတော့ သူ့နာမည်ကို အ၇င် မိတ်ဆက်ပြီး ပုဂံ ယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေ မှ ကြိုဆိုပါတယ်.. စသဖြင့် ဘာညာသရကာ နေကြာကွာစိ တောင်ကြီးပဲလှော် အာလူး ဖုတ်ပါတယ်..။
ပထမဆုံးအနေနှင့် ကျွန်မ တို့ကို လိုက်ပို့တာက ” ကန်တော့ပလ္လင်” ဘု၇ားပါ.။ Guide ပြောပြချက်အရ အလောင်းစည်သူမင်းတရားကြီးရဲ့ မြေတော်စပ်သူ မင်းတစ်ပါး ( နာမည် မမှတ်မိပါ) က ဘိုးတော် အလောင်းစည်သူမင်းကြီး ကို ပြစ်မှားမိလို့ အပြစ်ကနေလွတ်အောင် အလောင်စည်သူမင်းရဲ့ ပလ္လင် ကို ဌာပနာ ထားပြီး တည်ထားကိုးကွယ် ခဲ့တာတဲ့.။( စေတီဘုရားပုထိုး အဖြစ် ရှေ့ခိုးကန်တော့ ဖို့သင့်မသင့် ဆိုတာတော့ ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ်စဉ်စားဆင်ခြင်ကြပါကုန်)(ဤကားစကားချပ်)။
ကျွန်မ တို့ အဖွဲကလည်း ဘုရားသမိုင်းကို ဓါတ်ပုံ၇ိုက်တာလောက် စိတ်မဝင်စားကြလေတော့ ဘုရား ရှိခိုး ဖို့ ၅ မိနစ်အချိန်ပေးရင် ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ နာ၇ီ ဝတ် အချိန်ပေးကြပါတယ်။
Guide ပြောပြချက်အရေ၇ာ ကျွန်မ တို့ကြားဖူးသလောက်ပေါ့လေ “လှည်းဝင်ရိုးသံတညံညံ ပုဂံဘု၇ားပေါင်း” ဆိုတဲ့ ဆို၇ိုးစာကားအတိုင်း ပုဂံပြည်မှာ ဘု၇ားပောင်း “၄ သန်း” ကျော် ၇ှိပါတယ်တဲ့.။ဘာဖြစ်လို့ အဲလောက်တောင်ဘု၇ား များ၇လည်း ဆို၇င် ဟိုးအ၇င် က ပုဂံပြည်သူပြည်သားတွေက အ၇မ်းချမ်းသာပြီး မုဆိုးမ က အစ ဘု၇ားတည်နိုင်လို့ပါတဲ့လေ..။ ဘောစိတွေ ပေါ့..။
ဘာကြောင့် ပုဂံပြည်သူပြည်သားတွေ အဲလောက် ချမ်သာကြလဲ သိလား.. စိတ်ကြွဆေးတွေေ၇ာင်းလို့.. အဲ မှားလို့.. :P..
ဘယ်ဘု၇င်လက်ထက် တုန်းကလည်း မသိဘူး.. အ၇ှင်အစ္ဈဂေါဏ (စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံမှားနိုင်သည်။) ဆိုတဲ့ ထွက်၇ပ်ပေါက် ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦး၇ှိသတဲ့ (ထွက်ပြီးတော့၇ပ်ပဲပေါက်သလား မတ်တပ်ပဲပေါက်သလား မပြောတတ်ပါ ..:P )။ သူ့ဆီမှာ သတ္တုတွေ ကိုေ၇ွှဖြစ်အောင် လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အစွမ်း၇ှိတယ်တဲ့ (ဓါတ်လုံအကြောင်းကို အကျယ်မချဲတော့ပါ။) ဖိုထိုး၇င်း၇ထားတာပေါ့လေ.။ အဲဒီဓါတ်လုံနဲ ထိလိုက်တဲ့ အ၇ာမှန်သမျှရွှေဖြစ်သွားတယ်တဲ့.။ သူက တစ်အိမ်တက်တစ်အိမ်ဆင်း လိုက်ပြီး တို့ပေးသတဲ့ သူ့ဓါတ်လုံးနဲ..။ ဒါ့ကြောင့် ပုဂံပြည်သူပြည်သားတွေက ချမ်းသာလာပြီးဘု၇ားတည်နိုင်တာတဲ့..။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီ ပြည်သူတွေကလည်း စိတ်အားထက်သန်စွာ ဘု၇ားတည်ကြတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့.. ဘု၇င်က ဘု၇ားမတည်၇င် သတ်မယ်ပြောလို့တည်ကြတာတဲ့..။
သူပြောပြခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတွေထဲမှာ ကျွန်မ စိတ်အ၀င်စားဆုံးက အ၇ှင်အစ္ဈဂေါဏ ရဲ့ ဓါတ်လုံးပါ..။ ဟုတ်တယ်လေ ဒီလောက်အစွမ်းထက်တဲ့ ဓါတ်လုံးကို ဘယ်သူ ကများ စိတ်မ၀င်စားပဲနေနိုင်မလဲ..။ တစ်လုံးလောက်ရလိုက်လို့က တော့ မြန်မာ ပြည်က ဆင်းရဲချမ်းသာ ကွာဟနေသမျှ အကုန် တန်းတူ ဖြစ်အောင်လုပ်ပစ်မယ်.. ဒါတင်မက ဘူး တစ်ကမ္ဘာ လုံးက ဆင်းရဲနေတဲ့ သူတွေအားလုံးကို ချမ်းသာအောင်လုပ်နိုင်မယ်လေ.. ။ အ၇ှင်အစ္ဈဂေါဏ လို မြန်မာပြည် ကလူတစ်ချို့တစ်ဝက် သိတာလောက်နဲ ပြီးမသွားပဲ ကမ္ဘာတောင်ကျော်အုံမယ်လေ.. ဟုတ်ဘူးလား..။
ကန်တော့ပုလ္လင် စေတီ အတွင်းက ဘုရားဆင်းထုတော်
နောက်ခံ နံ၇ံဆေးပန်းချီနဲ ဘု၇ားဆင်းထုတော်
ဟုတ်ကဲ့ ဆက်ရေးပါ စောင့်ဖတ်ပါဦးမည်
ပုံနှင့် တစ်ကွ ဆက်လက်ဖြေဆိုပါ
ဆောတီးေ၇းချင်ဇောနဲ မှားတွားတယ်..။ အမှားထောက်ပြပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..။
ကျွန်တော်လည်း လာရောက် အားပေး၊ ကြည့်ရှု သွားပါတယ်။
လှည်းနဲ့ လေ နဲ့ မှားရိုက်ထားမိနေပြီ။
ပုဂံ ဆိုတာ မြန်မာတို့ရဲ့ ရာဇ၀င် အသည်းနှလုံးပါပဲ။
ပုဂံ ကို ရည်မှန်းပြီး လာတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေ အများကြီးပါပဲ။
ပုဂံ ကြောင့်လည်း မီးခိုးမထွက်တဲ့ စက်ရုံ (ခရီးသွား) လုပ်ငန်း ၀င်ငွေတွေ ရရှိနေပါတယ်။
မြန်မာတိုင်းလည်း ပုဂံ ကို ရောက်ဖူးသင့်ပါတယ်။
သူများ နိုင်ငံတွေ ဒီလိုနဲ့ လုပ်စားနေတာ များလှပြီ။
မီးခိုးမထွက်တဲ့ စက်၇ုံးဆိုတာ ရာနှုန်းပြည့် မှန်ပါ့မလား မဆူးရယ်…။ Tourist တစ်ယောက်က နိုင်ငံခြားကနေ ၇န်ကုန် ကို လေယာဉ်စီးပြီးလာ၇တယ်.. ၇န်ကနေတစ်ဆင့် ပုဂံကို သွားမယ်ဆို ၇င် ကား ၊ ၇ထား၊ လေယာဉ် တစ်ခုခု စီးပြီးသွားမှပဲ၇တာမလား..။ ဒီတော့ စက်၇ုံတွေလောက် မဟုတ်တောင် မီးခိုး ကတော့ ထွက်ပြီပေါ့…။
အများစု တင်စားတဲ့ ဥပမာ လေးတခုပါပဲ။
တင်စားတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် အတိအကျတော့ မှန်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ပဲကြီးလှော်ပေါ်တဲ့ အညာကိုလည်ပြီး အားရပါးရ စားလို့ အထက်ဆန် အောက်ဆန် လေအားကောင်းမယ် ဆိုရင်လည်း မမ ၀ီအာဝမ်းကော အခိုးထွက်တယ် ပြောမလားလို့ တွေးနယ်ချဲ့မိပါတယ်။
Jagbir Singh – 2010 – Business & Economics – 232 pages
Tourism is unique because it involves industry without smoke, education withoutaclassroom, integration without legislation and diplomacy without formality.
အပေါ်ကစာအုပ်မှာ.. Tourism is unique because it involves industry without smoke လို့ရေးထားတယ်…။
ပုဂံ စေတီပုထိုး အရေအတွက်“ လှည်းဝင်ရိုးသံ တညံညံ ” သံပေါက်နဲ့ပြောရင်.. အဆူပေါင်း ၄၄၄၆၇၃၃ ရှိမယ်..
မိုင် ၂၀ ပတ်လည်မှာ… ၄သန်းကျော်ဘယ်လိုတည်မလည်း…
“ ရွှေလသာ ၀ါဝါ၀င်း ” ဆိုပြီး ပုဂံစေတီ အဆူပေါင်း ၄၄၆၄၄၄ ဧရာဝတီ မြစ်ကမ်း ပြိုရာတွင်ပါသွားတယ်တဲ့..။
ဆိုတော့.. တဆိတ်လွန်တဲ့အထဲ.. ဆိတ်နွားမျက်လုံးနဲ့လူကြီးက ၀င်ရှုပ်လိုက်တော့…
ရွာထဲက လူတွေ ကြည့်၇တာ ဘယ်သူမှ ၇ှင်အစ္ဈဂေါဏ ၇ဲ့ ဓါတ်လုံးကို စိတ်ဝင်စားပုံ မပေါ်ဘူး..။ ကျွန်မကတော့ စနေ တနင်္ဂနွေတွေမှာ လိုက်၇ှာ မလား စဉ်စားနေတာ..
“””ဆို၇ိုးစာကားအတိုင်း ပုဂံပြည်မှာ ဘု၇ားပောင်း “၄ သန်း” ကျော် ၇ှိပါတယ်တဲ့.။ဘာဖြစ်လို့
အဲလောက်တောင်ဘု၇ား များ၇လည်း ဆို၇င် ဟိုးအ၇င် က ပုဂံပြည်သူပြည်သားတွေက
အ၇မ်းချမ်းသာပြီး မုဆိုးမ က အစ ဘု၇ားတည်နိုင်လို့ပါတဲ့လေ..။ ဘောစိတွေ ပေါ့..။””””
သူကြီးကလဲ မိုင်၂၀ ပတ်ချာလည်ဘယ်လိုတည်မတဲ့။ဟိုက် ခက်ကုန်ပီ။
တယ်ကောင်းတဲ့ဓါတ်ပုံတွေပါလား..we R one ရေ
we r one ရေ
ရလိုက်လို့ကတော့ gas တွေ ကျောက်မျက်တွေရောင်းနေစရာ မလိုဘူးပေါ့နော။
အဇ္ဇ=ဆိတ် ၊ဂေါဏ=နွား ပါ၊
မြန်မာမီးရထားမောသွားပြီး မပြင်နိုင်တော့လို့ အန်တီကဘဲ
“ဘုရားရှေ့ခိုး ဖို့ ၅ မိနစ်အချိန်ပေးရင် ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ နာ၇ီ ဝတ် အချိန်ပေးကြပါတယ်”
စာပိုဒ်ကို ရှိခိုးလို့ ပြင်ပေးပါရစေ၊
ဘုရားတရားသံဃာမှာ ရှိတဲ့ အရည်အချင်းတွေ အတုခိုးတဲ့အတွက် ရှိခိုးတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။
အခုမှပဲ မီးရထားခေါင်းတွဲနဲ့ တွေ့တော့တယ် we R one ရေ။
(ကျွန်မ တို့ အဖွဲကလည်း ဘုရားသမိုင်းကို ဓါတ်ပုံရိုက်တာလောက် စိတ်မဝင်စားကြလေတော့ ဘုရားရှိခိုးဖို့ ၅ မိနစ်အချိန်ပေးရင် ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ နာရီဝက် အချိန်ပေးကြပါတယ်။ ) ဆိုတော့
ဘုရားလည်း ဖူးရင်း လိပ်ဥလည်း တူးရင်းလို့ ကြားဖူးတာ….
အခုတော့ လိပ်ဥတူးတာက များသွားတယ်ထင်တယ်။
တကယ် မဆူးရဲ့ ချဲကား ပြီးပြောတာ မဟုတ်ဘူး.. အားလုံး က ကုမ္ပဏီ က အလကား လိုက်ပို့လို့ သာ လိုက်လာကြတာ..။ ဝါသနာ က ဓါတ်ပုံပဲ.. ဟိဟိ ကျွန်မ အပါအဝင်ပေါ့လေ…
ှရှိခိုး နဲေ၇ှ့ခိုး ကို ပြင်လိုက်ပါပြီ၇ှင့် အမှားထောက်ပြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။။
ပုဂံ ကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅နှစ် ကရောက်ဖူးတယ်။ ဘာမှမပြောင်းလောက်ဘူး ထင်ပါရဲ့။
နေဝင်ချိန် ကို စောင့်ကြည့်ရတာ ဘယ်ဘုရား ပေါ်ကလဲဟင်။ ကန်တော့ပုလ္လင် ဘုရား လား။
Post လေးတွေ ဆက်တင်ပါဦး။ အလွမ်း ဆက်ကြည့်နေပါ့မယ်။ ကျေးဇူးဘဲနော်။
မပဒုမ္မာရေ – ရှစ်ခိုး နဲ့ ရှိခိုး အရင်မကွဲတာ အခုမှ ရှင်းတော့တယ်။ ကျေးဇူးပါနော်။
အဲဒီဓာတ်လုံး သဂျီးဆီမှာရှိတယ်။ ရွာထဲမှာ တခါမန်းရင် ပွိုင့်တက်နေတာ ကြည့်ပါလား။